Ny fanamasinana dia mety ho dingana sarotra tokoa satria ny mpanjifa sy ny orinasa dia manova matetika ny angon-drakitra ifandraisany amin'ny fotoana. Misy tsy fitoviana amin'ny fomba fampidirany ny sehatra data rehetra - avy amin'ny anarany, adiresy mailaka (es), adiresy fonenana, adiresy orinasa, sns.
Zara Ziad dia mpandalina marketing amin'ny vokatra ao amin'ny Data Ladder miaraka amina IT. Mafana fo amin'ny famolavolana paikady atiny famoronana izay manasongadina ny olan'ny fahadiovana tahirin-kevitra tena izy atrehin'ny fikambanana maro ankehitriny izy. Mamokatra atiny izy hampitana vahaolana, torohevitra ary fomba fanao izay afaka manampy ny orinasa hampihatra sy hahatratra ny kalitaon'ny tahiry voajanahary amin'ny fizotran'ny asa aman-draharahan'izy ireo. Miezaka izy mamorona atiny izay kendrena mankany amin'ny mpihaino marobe, manomboka amin'ny mpiasa teknika ka hatramin'ny mpampiasa farany, ary koa amin'ny marketing azy amin'ny sehatra nomerika isan-karazany.